Kuputika kwechipiri kwakataurwa paKabul airport mushure mekunge vanhu gumi nevatatu vaurawa pakutanga kubhomba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Kuputika kwechipiri kwakataurwa paKabul airport mushure mekunge vanhu gumi nevatatu vaurawa pakutanga kubhomba
Mishumo yehungwaru yakanga yaonekwa kutanga kwesvondo rino yambiro nezve "zvava pedyo" zvegandanga kuKabul airport neISIS-K - Islamic State yakabatana muAfghanistan.
Kuputika kwedombo reKabul's Hamid Karzai International Airport.
Kuputika kunoratidzika kunge kuri kuzviuraya kwekubhomba.
Sekureva kwaTaliban, vanhu gumi nevatatu vakafa mukutanga kuputika.
Kuputika kwemabhomba maviri padhuze neKabul airport nhasi kwakakonzera "kuwanda kwevanhu veUS & vanhuwo zvavo", Pentagon yakati.
Kuputika pakutanga nhasi padyo neAbbey Gate yeKabul's Hamid Karzai International Mheport, yakasimbiswa ne US Department of Defense Munyori wenhau, John Kirby, uyo akati kuputika uku kwakakonzera "mukukuvara kwevanhu vasingazivikanwe."
Sekutaura kwemutauriri weTaliban, iro bhomba rekuzviuraya rinoita sekuuraya vanhu vanosvika gumi nevatatu, kusanganisira vana nevarindi veTaliban.
Kuputika kwechipiri kwakamhan'arwa kunzvimbo yeBaron Hotel padhuze neKabul airport zvichitevera kuputika kukuru sezvo kubuda kwemauto kuri kuenderera.
Nguva pfupi kuputika kwechipiri kusati kwasvika, Mumiriri weFrance kuAfghanistan akayambira vanhu kuti "vatizire" kubva pamasuwo kuenda kunhandare yeKabul, achiti bhomba rechipiri rinogona kunge rave pedyo mushure mekusimbiswa kwemishumo yekuputika kukuru sezvo kubuda kwemauto kuri kuenderera.
Ambassador David Martinon vakatumira nyevero "inokurumidza" kune "shamwari dzedu dzose dzeAfghan" musi weChina, vachinyevera kuti "kuputika kwechipiri kunogona kuitika." Vakuru veUnited States vakati kuputika kwekutanga kwaive basa remunhu anozviuraya ari kunze kwenhandare yendege.
Mamiriro ezvinhu paHamid Karzai International Airport akange atove nemhirizhonga pamberi pekuputika, sezvo zviuru zvevaAfghans, maAmerican nevamwe vachitsvaga nzira dzakachengeteka kubuda kunze kwenyika usati wasvika musi wa31 Nyamavhuvhu.